VFX technology that makes the imaginary world look real- Tech News Nepal Tech News Nepal
काल्पनिक संसारलाई वास्तविक जस्तै देखाउने प्रविधि- भीएफएक्स
काठमाडौं । भिजुअल इफेक्ट्स अर्थात् भीएफएक्स काल्पनिक संसारलाई वास्तविक संसारको रुपमा प्रस्तुत गर्न प्रयोग हुने प्रविधि हो । फिल्म निर्माणमा भिजुअल इफेक्टहरूको प्रयोग गरी वास्तविक संसारमा नभएका चिजलाई प्रस्तुत गरिन्छ ।
भीएफएक्सबाट काल्पनिक संसारलाई समेत प्रभावकारी ढंगले वास्तविकतामा ढालेर देखाउन सम्भव हुन्छ । जुन जादुमय र आकर्षक हुने गर्दछ ।
भीएफएक्स त्यो प्रक्रिया हो, जसमा डिजिटल आर्ट सफ्टवेयरलाई परम्परागत आर्टसँग मिलाएर वास्तविक संसारमा विद्यमान नरहेका घटना सिर्जना गरिन्छ ।
भीएफएक्स मार्फत् अविश्वसनीय सांसारिक चिज सिर्जना गर्न सकिन्छ । सन् १८५७ मा पहिलो पटक ओस्कार रेजल्यान्डरले ३२ वटा फरक नेगेटिभलाई एउटा इमेजमा संयोजन गरेर प्रस्तुत गर्न भीएफएक्स प्रयोग गरेका थिए ।
१८९५ मा अल्फ्रेड क्लार्कले पहिलो पटक मोशन पिक्चर स्पेशल इफेक्ट सिर्जना गरे ।
भीएफएक्सका लागि किन हरियो पर्दाको प्रयोग गरिन्छ ?
हरियो रंग कुनैपनि प्राकृतिक छालाको टोन वा कपालको रंगसँग मेल खाँदैन । जसले क्रोमा सम्पादन गर्दा अभिनयमा रहेका कलाकारको कुनै अंश/भाग काटिँदैन ।
यदि हरियो रंगमा सम्पादन गर्नुपर्‍याे भने निलो रंगको प्रयोग गरिन्छ ।
भीएफएक्सलाई मुख्यगरी तीन प्रकारले विभाजन गरिएको छ । जसमा सीजीआई, कम्पोजिटिङ र मोशन क्याप्चर रहेका छन् । कम्प्युटर-जेनेरेटेड इमेजरी अर्थात सीजीआईले फिल्म र टेलिभिजनमा डिजिटल रुपमा इमेज सिर्जना गर्ने काम गर्दछ ।
सीजीआई भिएफएक्सको सहायक विधा हो । काल्पनिक फिल्म निर्माताले भौतिक वातावरणमा उपलब्ध नहुने र क्याप्चर गर्न नसकिने अवस्थिति सिर्जना गर्न अथवा हेरफेर गर्न यसको प्रयोग गर्दछन् ।
त्यसैगरी कम्पोजिटिङ भनेको छुट्टाछुट्टै स्रोतका दृश्यहरू संयोजन गरी एउटा प्रतिबिम्ब बनाउने प्रक्रिया हो ।
मोशन क्याप्चरको कुरा गर्नुपर्दा यसका विशेषज्ञले कलाकारमा सेन्सरहरू राख्दछन् । जसले कलाकारको गति तथा चालहरूको रेकर्ड राख्दछ र तिनीहरूलाई वास्तविक समयमा कम्प्युटर स्क्रिनमा भर्चुअल कंकालको रुपमा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छ ।
यो प्रविधि ठूलो स्क्रिनमा कम र खेलकुद तथा एथ्लेटिक्समा अधिकतम प्रयोग गरिन्छ ।
टिभी र स्मार्टफोनको ब्राइटनेस नाप्ने ‘निट्स’ के हो र किन आवश्यक छ ?
काठमाडौं । कहिल्यै टेलिभिजनको ब्राइटनेसको बारेमा सोच्नुभएको छ ? आखिर केका आधारमा टेलिभिजनको ब्राइटनेस मापन गरिन्छ
काठमाडौं । पेटमा स-साना घाउ बनाई दूरविनका मद्दतले तल्लो पेटका भित्री अंगका समस्या हेर्ने विधिलाई
के हो ‘वेब ३.०’, अनि कसरी हुन्छ काम ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वभर वेब ३.० को चर्चा भइरहेको छ । जुन डब्लूडब्लूडब्लू (वर्ल्ड
के हो प्राइभेट फाइभजी ? जुन अब तपाईं नजिकैको व्यवसायिक क्षेत्रमा आउँदैछ
काठमाडौं । फाइभजीमा आधारित वायरलेस सेवा भनेको यस्तो रेडियो कनेक्सन हो, जसले हावाको माध्यमबाट ल्यापटप